रोग स्विकार्दैनन् मानसिक बिरामी- प्रदेश ३ - कान्तिपुर समाचार
रोग स्विकार्दैनन् मानसिक बिरामी
जेष्ठ २, २०७५ फातिमा बानु
काठमाडौँ — उनलाई आजभोलि अनावश्यक कुरामा जिद्दी गरिरहने, एउटै कुरा बारम्बार दोहर्‍याउने र एक्लै बस्ने बानी लागेको छ । नुवाकोटकी ३८ वर्षीया उनी अहिले महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालको मानसिक उपचार कक्षमा भर्ना भएकी छन्, भर्ना त भइन् तर आफूलाई बिरामी मान्न पटक्कै तयार छैनन् ।
उनका श्रीमान् नवीन तामाङ भन्छन्, ‘उसलाई उपचारको खाँचो छ, औषधि खान मान्दिनन्, बिरामी भन्यो कि रिसाउँछिन् ।’ श्रीमतीले उपचार नगरी घर जाउँ भनेर झगडा गरिहँदा उनी दिक्क भइसकेका छन् ।
उनको समस्या नै उपचार गर्न नमान्ने भएपछि रोग बल्झिरहने समस्याले उनलाई गाँजेको नै छ, परिवारलाई पनि उत्तिकै तनाव बनाइदिएको छ । पाँच महिनाकी शिशुले दूधसमेत खान नपाएको श्रीमान् तामाङले सुनाए । उनीजस्तै विभिन्न खाले मानसिक समस्या बोकेर अस्पताल धाउनेको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ ।
उपचार सेवाको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा मानसिक बिरामीको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । महारागन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालको तथ्यांकअनुसार अस्पतालमा दैनिक आउने एक सय बिरामीमध्ये ६० प्रतिशत महिला नै हुने गरेका छन् ।
पुरुषको तुलनामा महिला दोब्बर बढी भइसके । व्यस्त जीवनशैली, एक्लोपन, दुव्र्यसनी र सामाजिक बेवास्ताका कारण युवावर्ग पनि यो रोगको चपेटामा छ । महिलाको हकमा भने घरेलु हिंसा, संस्कृतिको नाममा महिलामाथि हुने लाञ्छना र मायाममताको अभावले पनि उनीहरू मानसिक रोगको चपेटामा पर्दै गइरहेको मनोचिकित्सक बताउँछन् । महिला अधिकार न्यूनीकरणका लागि राज्यमा घरेलु हिंसाको दर घट्नेको साटो बढेको देखिन्छ, जुन मानसिक रोगको प्रमुख कारण मानिन्छ ।
पाँच वर्षअघि नेपाल प्रहरीको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा घरेलु हिंसासम्बन्धी करिब एक हजार उजुरी परेका थिए । अहिले उजुरीको संख्या बर्सेनि सात हजार पर्ने गरेका छन् । मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्रको तथ्यांकअनुसार उपचारको दायरामा आएका लगभग ५० हजार बिरामीमध्ये ६३ प्रतिशत महिला छन् र ३७ प्रतिशत पुरुष छन् । उनीहरूमा चिन्ता गरिरहने समस्या, डिप्रेसन र मानसिक असन्तुलन, छारे रोगलगायतका समस्या देखिएका छन् ।
मनोचिकित्सक डा.कपिलदेव उपाध्याय भन्छन्, ‘महिलालाई बढी अनुशासनमा बस्नुपर्ने समाज छ, जागिरे महिलालाई घर र अफिसको काम भ्याउनुपर्ने दोहोरो जिम्मेवारी छ, यसले महिलालाई मानसिक रोगी बनाइदिएको हो ।’
मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. सरोज ओझा भन्छन्, ‘परम्परागत समाजमा महिलाले धेरैजसो समय घरमै बिताउँछन्, मनका कुरा पोख्ने वातावरण पाउँदैनन्, अनि डिप्रेसनको सिकारमा पर्छन् ।’ विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा हरेक ५ जना व्यक्तिमध्ये एक जनामा कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक स्वास्थ्य समस्या छ । डिप्रेसनका बिरामी मात्रै ३० करोड छन् ।
हरेक वर्ष तीन करोड मानिस मानसिक रोगी बन्ने गरेका छन् । यसको असर व्यक्ति, परिवार र समाजमा मात्रै देखिएको छैन । मानसिक रोगले काम गर्ने क्षमता ह्रास ल्याइदिन्छ, जसको प्रत्यक्ष असर विश्व अर्थतन्त्रमा परिसकेको चिकित्सक बताउँछन् ।
नेपालमा करिब ५५ लाख मानिस कुनै न कुनै मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका अनुसार १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलाको मुत्यको पहिलो कारण आत्महत्या हो । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो वर्षमा पाँच हजारले आत्महत्या गरेका छन् । चार वर्षको तथ्यांक केलाउँदा आत्महत्या दर १३ प्रतिशतले बढेको छ । आत्महत्या गरेकामध्ये ९० प्रतिशतमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको बताइन्छ । मनोपरामर्शदाताका अनुसार मानसिक समस्या परामर्शमै समाधान गर्न सकिन्छ ।
परामर्श, पारिवारीक सहयोगको अभाव र बेवास्ताका कारण मानसिक रोगले आत्महत्याको दर बढाइरहेको छ । मानसिक रोगबारे खुलेर बोल्न हिच्किचाउने, खुलेर कुरा नगरेसम्म रोग निर्मूल हुन नसक्ने मनोचिकित्सकहरू बताउँछन् । समुदायमा ८ प्रतिशत महिला र ५ प्रतिशत पुरुषमा यो रोग देखा पर्ने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंको तथ्यांक छ । सन् २००५ यता महिलामा मानसिक रोग १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको कार्यालयले जनाएको छ । संगठनको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक ९ लाख मानसिक रोगी थपिने गरेको छ । डा. ओझाका भन्छन्, ‘यो कुल संख्याको ४ प्रतिशत हो ।’
मानसिक रोग घरघरको समस्या भएको बन्दै गएकाले यसले आत्महत्याको दर संख्या बढिरहेको मनोचिकित्सक डा. कमल गौतम बताउँछन् । उनले भने, ‘झाडापखालाभन्दा पनि मानसिकजस्तो सामान्य रोगको उपचार नजानेर मान्छे मरिरहेका छन् ।’ दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा मानसिक रोगका कारण हुने आत्महत्या दर एक तिहाइले कम गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७५ ०९:३६
कीर्तिपुर प्लास्टिकमुक्त घोषित
काठमाडौँ — कीर्तिपुर नगरपालिकालाई प्लास्टिक झोलामुक्त घोषणा गरिएको छ । सोमबार नगरपालिकालाई एक कार्यक्रमकाबीच प्लास्टिकमुक्त घोषणा गरिएको हो । सोमबार बिहान नगरपालिकाका कर्मचारी र स्थानीय नागरिक अगुवाहरूले नगर परिक्रमा गरेका थिए ।
मेयर रमेश महर्जनले भने, ‘जेठ र असार महिनाभरि हामी प्लास्टिकमुक्त अभियानको आवश्यकता र फाइदाबारे स्थानीयलाई बताउने र जनचेतना फैलाउने कार्य गर्छौँ । साउन १ बाट प्लास्टिक प्रयोग गरेको भेटिए कारवाही गर्छौँ ।’
प्लास्टिक प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्न प्रत्येक घरमा एउटा एउटा कपडाको झोला बाँड्ने योजना बनिसकेको छ । ‘एउटा कपडाको झोलाको ३५ रुपैयाँ पर्ने रहेछ,’ शाखा अधिकृत सुजिन्द्र महर्जनले भन्छन्, ‘नगरवासीलाई घरैपिच्छे नि:शुल्क उपलब्ध गराइनेछ । यसले प्लास्टिकका झोला निकै घट्नेछन् ।’
प्लास्टिकको प्रयोग घटाउनेतर्फ ठूला ‘सपिङ मल’ हरूले प्रयोग गर्ने गरेको कपडाको झोला कीर्तिपुरबाटै आपूर्ति हुने गरेको छ । महर्जनले भने, ‘यहाँ त्यस्ता झोला उत्पादन गर्ने एउटा ठूलो उद्योग छ भने महिला समूहहरूले पनि उत्पादन गर्छन् । तसर्थ नगरवासी नयाँ कपडाको झोला प्रयोग गर्न सजिलै अभ्यस्त हुनेछन् ।’
संसद्अन्तर्गतको वातावरण समितिले २०७१ भदौमा प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही साल पुस मध्यमा विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७२ सुरुवातदेखि उपत्यकामा प्लास्टिक झोला निषेध गर्ने भने तापनि लगत्तै आएको भूकम्प र नाकाबन्दीले गर्दा यसको कार्यान्वयनतर्फ कसैको ध्यान पुगेन । फलस्वरूप त्यो अभियान सफल हुन सकेन ।
अहिले भने नगरपालिकाले उक्त योजना आफ्नो नगरमा कडाइका साथ लागू गर्ने बताएको छ । नगरपालिकाका अनुसार ४० माइक्रोनभन्दा पातलो र २०/३५ साइजभन्दा साना प्लास्टिक प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
प्लास्टिकका झोलाले वातावरण मात्र नभई मानव स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पार्छ । कतिपय स्थानमा फोहोरलाई खुला स्थानमा जलाउँदा प्लास्टिकबाट निस्केको विषादीयुक्त धुवाँले मान्छेमा क्यान्सर गराउने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् ।